ဦး နှောက်လေ့လာမှုကဆယ်ကျော်သက်များသည်လူကြီးများနှင့်မည်သို့ခြားနားစွာသင်ယူသည်ကိုဖော်ပြသည် (2016) - Your Brain On Porn
ဦးနှောက်လေ့လာမှုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက် (2016) ထက်ကွဲပြားခြားနားသင်ယူဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြသ
[မှတ်ချက်: ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ကောင်းလူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အမှု၌ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသပေးနိုင်မလား?]
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏မှတ်ဥာဏ်များကိုလေ့လာရန်နှင့်ဖွဲ့စည်းရန်စွမ်းရည်ကိုကြွယ်ဝစေသည့်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည် - ကွဲပြားခြားနားသော ဦး နှောက်ဒေသနှစ်ခု၏ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှု။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဦး နှောက်နှင့်မတူဘဲဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်သည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လှောင်ပြောင်သရော်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများသည်ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဘဲဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်ရင့်ကျက်သော ဦး နှောက်၏အရေးပါသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
"ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏လေ့လာမှုများမကြာခဏ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက် ဆယ်ကျော်သက်'' ဆု - ရှာဖွေခြင်းအပြုအမူ။ ကိုလံဘီယာ၏ Mortimer B. Zuckerman စိတ် ဦး နှောက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်ကိုလံဘီယာရှိစိတ်ပညာပါမောက္ခ Daphna Shohamy ကပြောကြားရာတွင်ဤသဘောထားသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများတွင်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ပုံရိပ်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်ကျော်သက်များ၌ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုလူကြီးဘဝသို့အောင်မြင်စွာလမ်းပြနိုင်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
41 ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် 31 လူကြီးများပါဝင်ပတ်သက်သောဤလေ့လာမှုသည်အစပိုင်းတွင်တစ်ဦးဦးနှောက်ဒေသအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စာရေးသူဟာကိုခေါ် striatum။ ယခင်သုတေသန striatum ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်စီစဉ်ရာမှအဆင့်မြင့်ဦးနှောက် function ကိုများစွာသောရှုထောင့်ကိုသြဒိနိတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့အများဆုံးဟုခေါ်ဝေါ်တစ်ခုခုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ကောင်းစွာ-လူသိများသည် အားဖြည့်သင်ယူမှု.
“ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အားဖြည့်ခြင်းသင်ခန်းစာသည်ခန့်မှန်းခြင်း၊ သင်မှားသည်ဖြစ်စေမှားကြောင်းပြောခြင်းနှင့်နောက်လာမည့်အချိန်တွင်ထိုအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောခန့်မှန်းရန်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်” ဟုဤသုတေသနကိုပြီးဆုံးခဲ့သည့်စာတမ်း၏ပထမဆုံးစာရေးသူ၊ ကိုလံဘီယာတွင်စိတ်ပညာဖြင့်ပါရဂူဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တွင်ပါရဂူဘွဲ့ရသူဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်နံပါတ်များနှင့်အတူကတ်များတစ်စီးရီးပေးထားကြသည်နှင့် sequence ကိုအတွက်လာမယ့်အရေအတွက်ကခန့်မှန်းဖို့တောင်းနေကြသည်ဆိုပါစို့။
ဒေါက်တာဒေးဗစ်ဝိုးက“ အကယ်၍ သင်ထင်သလောက်မှန်ရင် striatum ဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသပြီးသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးတယ်။ အမှန်ကတော့ ဦး နှောက်ကိုအောင်မြင်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူနိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပါပဲ။
ဦး နှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ဒေါက်တာ Shohamy က Ph.D Adriana Galvánနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ ဦး နှောက်သုတေသနဌာန၏စိတ်ပညာနှင့်စိတ်ပညာတွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာဂယ်လ်ဗန်သည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဦး နှောက်ပုံရိပ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ သူတို့ကအတူတကွလေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်ပါဝင်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ ဦး နှောက်ကိုအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ စာရေးဆရာများကဆယ်ကျော်သက်များ၏သာလွန်သောအရည်အချင်းများသည်အလွန်မြင့်မားသော striatum ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယူဆခဲ့သည်။
“ ဒါပေမယ့်ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ ဦး နှောက်ကိုအရွယ်ရောက်သူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်အဖွဲ့နှစ်စုအကြားဆုလာဘ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုမှာဘာထူးခြားချက်မှမရှိခဲ့ပါဘူး” ဟုဒေါက်တာဒေးဗစ်ဆိုကပြောကြားခဲ့သည်။ လူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားကွာခြားချက်မှာ striatum တွင်မဟုတ်ဘဲအနီးအနားရှိ hippocampus တွင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Hippocampus သည် ဦး နှောက်၏မှတ်ဉာဏ်ဌာနချုပ်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်များ၊ နေရာများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမှတ်တရများကိုသိမ်းဆည်းရန်အရေးကြီးသော်လည်း၎င်းသည်အားဖြည့်သင်ကြားရေးနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုတွင်စာရေးသူ၏ fMRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အားဖြည့်သင်ကြားစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်များ - လူကြီးများအတွက်မဟုတ်ဘဲ - hippocampal လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ထိုလှုပ်ရှားမှု striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတင်းကျပ်စွာညှိနှိုင်းခံရဖို့သလိုပဲ။
ဒီဆက်သွယ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်, သုတေသီများထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာလုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်ခဲတံအဖြစ်သင်ယူတာဝန်များကိုသို့အရာဝတ္ထု၏ကျပန်းနှင့်ဆီလျှော်ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာချော်။ ပုံရိပ်တွေ-သောသင်တန်းသားများကိုလက်ျာဘက်မှန်းဆဒါမှမဟုတ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းနောက်ခံဆူညံသံ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်မှားယွင်းတဲ့-တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းရှိမရှိမ bearing ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာမေးသောအခါလူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ဦးစလုံးတ္ထု, ဒါပေမယ့်မရအခြားသူတွေအချို့မြင်နေအောက်မေ့တော်မူ၏။ သို့သျောလညျးကိုသာဆယ်ကျော်သက်အတွက်အားဖြည့်သင်ယူမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာ hippocampus နှင့် striatum အကြားဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရသည့်လေ့လာရေးနှင့်အတူဆက်စပ်အရာဝတ္ထုများ၏မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုလံဘီယာ၏ ဦး နှောက်သိပ္ပံဆိုင်ရာ Kavli တက္ကသိုလ်မှဒေါက်တာ Shohamy က“ ဒီရလဒ်တွေကနေဆယ်ကျော်သက်တွေဟာယေဘုယျအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းကောင်းရဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မှတ်မိတာကကွဲပြားတယ်” လို့ပြောတယ်။ ။ သူကဆက်နွယ်မှုမရှိသောအရာနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် ဘဝ၏အရေးကြီးသောအဆင့်တွင်၎င်းင်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ”
အမှန်စင်စစ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုပြသထားသော hippocampus နှင့် striatum အကြားကဒီတိုးမြှင့်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောစာရေးဆရာများငြင်းခုန်, အစွမ်းထက်အမှတ်တရများကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသောအခါတစ်ဦးအရေးပါသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျယ်ပြန့်စွာပြောရမည်ဆိုလျှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်ဆယ်ကျော်သက်များလွတ်လပ်ရေးရရန်စတင်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာ Shohamy ကဆိုသည်။ "ဒီအချိန်ကာလအတွင်း ဦး နှောက်က overdrive ကိုသင်ယူတာထက်ဘာလုပ်ဖို့လိုတာလဲ။ " ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ထူးခြားမှုပဲ ဦးနှောက် သူတို့လေ့လာတာတွေကိုသာမကမောင်းနှင်နိုင်တဲ့အချက်တွေပါ။ ဒါပေမယ့်လူကြီးဘဝအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုသူတို့ဘယ်လိုသုံးကြလဲဆိုတာကိုပါ။ ”
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: ဤစာတမ်းကိုခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်မှာ - "အထိခိုက်မခံမှုကိုဆုချရန်အတွက်ထောက်။ ။ ဟစ်ပိုပေါမ်သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ပိုမိုအားဖြည့်သင်ကြားမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ " Doi: 10.1016 / j.neuron.2016.08.031,